घर अमेरिकी फुटबल स्टोरीहरू ब्राजिलियन फुटबल खेलाडीहरू Alisson Becker बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
LB ले ब्राजिलियनको पूर्ण कथा प्रस्तुत गर्दछ जो उपनाम द्वारा प्रख्यात छ “गोलकीपरहरूको मेसी“। हाम्रो एलिसन बेकर बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू तपाईंको बाल्यकालको समयदेखि आजको दिनसम्म तपाईंलाई उल्लेखनीय घटनाहरूको पूर्ण खातामा ल्याउँदछ। विश्लेषण प्रसिद्धी, पारिवारिक पृष्ठभूमि, सम्बन्ध जीवन, र अन्य अफ-पिच तथ्यहरू (कम ज्ञात) अघि उनको जीवनको कहानी समावेश गर्दछ।
हो, सबैलाई थाहा छ उनी कक्षामा ब्राजिलका गोलकीपर हुन्। जहाँसम्म, केहि थोरैले एलिसन बेकरको बायो मा विचार गर्छन् जुन एकदम चाखलाग्दो छ। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
एलिसन बेकर बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य -बाल्यकाल
एलिसन रम्सेस बेकरको जन्म अक्टोबर १21992 २ को अक्टोबरको दिन उनकी आमा, मागाली लिनो डे सुजा बेकर र बुबा, जोसे अगोस्टिन्हो बेकर (घर जग्गा दलाल) ब्राजिलको रियो ग्रान्डे डो सुल राज्यमा भएको थियो।
एलिसन बेकरका अभिभावकहरूले चित्रण गरे टाढा तल चित्रमा एक मध्यम वर्गको परिवारले सबै सदस्यहरूसँग विनम्र शुरुवात गर्थे।
उनको ठूलो भाइ मुरीएल, एलिसन र उनको विस्तारित पारिवारिक परिवारको सम्पूर्ण सदस्य संगै Ca मा जन्मेका थिएईसाई धर्मको विश्वास ठिक
कसरी फुटबल सुरु भयो: ब्राजिलमा फुटबलको महत्त्व बुझेपछि, एलिसन बेकरका आमा बुबाआमाले आफ्ना केटाहरूलाई खेलमा संलग्न गराउन चासो राख्थे। एलिसन र उसको जेठो दाइ, मुरिएल गुस्ताभो जो six बर्ष भन्दा जेठो छन् आफ्नो क्यारियरको सुरुमै गोलकीपर बन्ने भूमिका छनौट गर्छन्।
एलिसन बेकर बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य -भाइ बहिनीको प्रतियोगिता
एलिसन बेकरका अभिभावकहरूको लागि, ब्राजिलियन स्पोर्ट क्लब एकेडेमी अन्तर्राष्ट्रिय दुबै केटाकेटीहरू आफ्नो क्यारियर किकस्टार्ट गर्न सबैभन्दा राम्रो स्थान थियो। Muriel (तल चित्रित) जो6सालको उमेर थियो उनको युवा क्यारियरको अन्तिम चरण समाप्त भयो जुन 2003 बाट 2006 सम्म स्पेस गरिएको थियो।
एलिसन board बर्ष पछि जहाजमा आए, २००5मा। २०० to मा दुबै अभिभावक आफ्ना बच्चाहरूको लागि खुशीको भावनाको बारेमा कुरा गर्न कहिल्यै रोक्दैनन्। यो त्यस्तो बेला भयो जब क्लबको एकेडेमीबाट स्नातक गर्ने एलिसनले आफ्नो पहिलो भाइसँग पहिलो छनौट गोलकीपिंग भूमिकाको लागि प्रतिस्पर्धा गर्न थाले। डोना मगाली लिनो डि सुजा बेकरले हालसालै आफ्नो अन्तर्वार्तामा आफ्नी आमाले स्वीकार गरेकी थिए कि आफ्ना दुई छोराहरूले सुरूवातको लाइनको लागि प्रतिस्पर्धा गरेको देख्न गाह्रो थियो। उनको शब्दहरूमा;
त्यो धेरै गाह्रो थियो। तपाईं दुबै सुरूवात लाइनमा जान चाहानुहुन्छ? र यो कसरी सम्भव छ? मागली सोध्छन्।
एलिसन बेकर बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य -तिनलाई ठूलो मारियो
भाइहरूमध्ये बेकरले आफ्नो सपना साकार पार्न अझ कडा दृढ संकल्प राखेका थिए। उसले आफ्नो भाइलाई चोटपटक लाग्यो जसले अस्थायी रूपमा केही समयको लागि टिमबाट बाहिर जबरजस्ती गरेपछि उसले पहिलो स्थानको लागि प्रतियोगिता जित्यो। चोटपटकबाट मुरिएल फर्किएपछि, एलिसनले एक उल्कापातिक वृद्धि हासिल गरिसकेका थिए र यसरी अपूरणीय हुन सके। यसले मुरिएलले २०० in मा आफ्नो सानो भाईसँगको लडाई पछि optionण विकल्प लिनको लागि नेतृत्व गर्‍यो।
आफ्नो छोरालाई प्रतिस्पर्धा गरेको र अन्तमा सर्तमा आउनु भनेको माग्ली वा उनको पति न त केही थियो, जोसे अगोस्तिन्हो बेकरले उनीहरूको बच्चाहरूको प्रतिस्पर्धाको बारेमा भविष्यवाणी गर्न सक्थे। यद्यपि त्यहाँ दुबैलाई ठूलो समर्थन थियो जो पछि एक अर्काको लागि खुशी भए।
ऋणमा क्लब छोडेर केही हप्ता पछि, मुरीएलले सञ्चारकर्मीलाई खुलासा गरे;
मलाई थाहा छ कि यो मेरो स्थिति हराइरहेको छ। तर खुसी लाग्यो यो मेरो सानो भाई थियो जसले मलाई बाट लिईयो।
अलिन्सेन बेकर बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- डुडा सामना गर्दै
समय बित्दै जाँदा, एलिसनको महत्वाकांक्षा यूरोपियन स्काउट्सले ध्यान दिएर पार गर्ने कल्पित मान्यता होइन, तर कडा परिश्रमबाट प्राप्य वास्तविकता बन्न पुग्यो। उनलाई थाहा थियो कि गोलकीपिंग युरोपियन स्काउट्सको लागि बैंकमा जानको लागि अझ गाह्रो व्यापार हो। सोचाइको बावजुद, एलिसनले सकेसम्म राम्रो दिए
यो वर्ष 2012 वर्ष थियो जब डुङ्गाले क्लबलाई लोहेको मुट्ठीमा कोच गरे र त्यहाँ थियो कडा प्रतिस्पर्धाको कारणले खेलाडी र गोलकापर्सको बारेमा गम्भीर शंका राखेको छ।
अलिसन बेकरले महानता बढेको बेला आउँदा पौडीले ब्राजिल ब्राजिलको पूर्व गोलकर्तालाई चुनौती दिए डाडा जो क्लब संग उनको प्रतिस्पर्धा गर्न को लागि आए तर एक जवान एलिसन बेकर साल 2015 मा फुटबल देखि पूर्ण सेवानिवृत्ति मा मजबूर देखेर सदमे को समाप्त भयो।
अलिन्सेन बेकर बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- प्रसिद्धिको कारण
फर्काउन पछि डाडा सेवानिवृत्तिमा, एलिसनले यति धेरै ख्याति प्राप्त गर्न थाल्यो जुन युरोपियन स्काउट्सबाट धेरै चासोको पछि लाग्यो। प्रख्यात व्यक्तिसँग व्यवहार गर्ने उसको क्षमता सीधा आनुपातिक थियो उसको गोता तान्ने क्षमतामा, यसैले सबै बललाई नेटबाट टाढा राख्नुहोस्।
यो इटालियन साइड रोमा थियो जसले अन्तमा एलिसन बेकरलाई रेग्मीको दौड जित्यो। रोममा बेलायतमा, एलिसनले उनको अपर्याप्त खेलको समयको कारण निराश पारेका थिए जब उनले वोोजस्चे स्ज्जेस्नीलाई दोस्रो गोल खेले।
विगतको अनुभवमा ध्यान केन्द्रित गर्दै एलिसनले स्क्जेन्स्नीलाई विस्थापित गर्न आफ्नो मार्गमा हिँड्न थाल्यो जसले आफ्नो शुरुवात छोडिदियो र क्लबलाई जुभन्टसमा छोड्न बाध्य पारियो जसलाई बुढेसकालमा ब्याकअप प्रतिस्थापनको आवश्यकता पर्‍यो। Gianluigi Buffon.
पछि Loris Karius लिभरपूलको शोकित २०१ 2017/२०१। चैम्पियन्स लीगको अन्तिम सपना थियो, लिभरपूलले नयाँ गोलकीपरको खोजी शुरू गर्यो। एलिसन बेकर एक मात्र व्यक्ति थिए जसले विश्वासपूर्वक क्लबको फ्लपी गोलकीपरहरू बदल्न आवश्यक थियो।
19 जुलाई 2018 मा, 25 को उमेर मा, एलिसन बेकर आधिकारिक तौर पर एक लिवरपूल गोलकीपर को पुष्टि भएको थियो।
25 को उमेर मा उनको हातहरु चित्रण गरे, एलिसन सबै समय को सबै भन्दा महंगे गोलकीपर बन्यो, को स्थानान्तरण को पार एडसनसन मोरास (अधिक महंगा गोलकीपर जसको शुल्क पाउन्ड स्टर्लिंगमा भुक्तानी गरिएको थियो) र Gianluigi Buffon (जसको शुल्क यूरो मा भुक्तानी गरिएको थियो)। बाकि, जस्तै तिनीहरू भन्छन्, अहिले इतिहास हो।
एलिसन बेकर बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य -सम्बन्ध जीवन
हरेक महान ब्राजिलियन फुटबलर पछाडि, एक महान महिला छ, त्यसैले यो भनाइ छ। यस अवस्थामा, एक सफल एलिसन बेकरको पछाडि, त्यहाँ एक पटक नतालिया लोवे (तल चित्रमा) नाम गरेकी एक ग्लैमरस प्रेमिका थिइन जो पछि उनकी स्वास्नी बन्नुभयो।
निस्सन्देह, एलिस्न बेकरको जीवनशैलीले टाढाबाट उसको पूर्ण चित्र निर्माण गर्दछ। एक स्रोतका अनुसार, एलिसनलाई हाई स्कूलमा छँदा किशोरावस्थादेखि नै उनकी श्रीमती नतालिया लोवेलाई थाँहा थियो। एलिसनले फुटबलमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेको बेला, नतालियाले आफूलाई स्कूलको माध्यमबाट मेडिकल डाक्टरको रूपमा देखी किनभने प्रमाणहरू तल देखाइन्छ।
मिडिया स्रोतका अनुसार, दुबै प्रेमीले 2012 मा डेटिङ सुरु गरे, वर्ष एल्सनले इन्टरनेटिकसँग आफ्नो युवा क्यारियरको अन्त्य गरे। यो बेकरको रूपमा एक पटक इन्स्टाग्राम पोस्ट (तल हेर्नुहोस्) सेप्टेम्बरको 9th, 2016 अनुवाद अनुवाद कैप्शनिंग संग साझा गरियो;
"हामीलाई बधाई छ, मेरो प्रेम !! फोटो आफैंको लागि बोल्छ, तर म तपाईंलाई भन्न चाहन्छु कि म तपाईंलाई धेरै माया गर्छु, र म तपाईंको साथमा धेरै खुसी छु !! Years बर्ष। "
तल आफैलाई हेर्नुहोस्;
माथिको फोटो २०१ both मा भएको दुबैको निजी विवाह भएको एक बर्ष पछि मात्र फोटो खिचेको थियो। दम्पतीको सँगै हेलेना नामको एक सानी बालिका छ जसको जन्म २०१ born मा भएको थियो।
एलिसनले साबित गरेको छ, कतिपय पटकको संख्या कति सुन्दर पति र बुबा हुन्। उनको प्रिय पत्नीलाई जन्मिएको बेला त्यहाँ ब्राजिलको गोलकर्ता पनि उनको सानो हेलेनाको धेरै शौक हुन जान्छ।
उनको छोरी हेलेना बेकरका लागि एक महान प्रेरणा हुन् जो उनको ट्रेंडिंग फोटोहरू पोस्ट गर्न प्रयोग गरिन्थ्यो। तल उसको एउटा हावामा उनलाई टसको बारेमा देखाउँदछ।
जन्मदिन विशेष अवसरहरू हुन् जसले बेकर परिवारको लागि उत्सवको लागि आह्वान गर्दछ। तल हेलेनाको पहिलो जन्मदिन मनाउने मायालु आमा बुबाको फोटो छ।
एलिसनका लागि, यो सबै आफ्नो प्रदर्शनको बारेमा र आफ्नो व्यक्तिगत विजय प्रशंसकहरूलाई प्रदर्शन।
एलिसन बेकर बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य -व्यक्तिगत तथ्यहरू
येशू ख्रीष्टलाई हेर्नुहोस्:
एकचोटि तपाईंले माथि उसको हेराईहरू देख्नुभयो, त्यसपछि तपाईं यसलाई देख्न सक्नुहुन्न। माथिको एलिसन बेकरको तस्वीर येशू ख्रीष्टको जस्तो देखिन्छ।
उहाँको कुत्ताको बारेमा:
उनकी पत्नी र बच्चा एलिसनको सहयोगी कुकुर पृथ्वीमा एक मात्र चीज हो जसले उहाँलाई प्रेम गर्दछ भन्दा बढी उहाँलाई प्रेम गर्दछ।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो एलिसन बेकर पढ्नको लागि धन्यबाद बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्यहरू। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताका लागि प्रयास गर्दछौं। यदि तपाईंले केहि देख्नु भयो जुन यस लेखमा ठिकै लाग्दैन भने, कृपया तपाईंको टिप्पणी दिनुहोस् वा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्!